बलिउडका यी ३ कलाकारहरु ,जसले प्रेम असफल भएपछि गरे मागी विवाह (तस्विर) - Medianp.com
बलिउडका यी ३ कलाकारहरु ,जसले प्रेम असफल भएपछि गरे मागी विवाह (तस्विर)
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: , ०, ०१०:३१0
काठमाडौँ । प्रत्येक प्रेम जोडीको चाहना प्रेम गरेपछि त्यही ब्यक्तिसँग विवाह गरौ भन्ने हुन्छ । तर सबैको यो चाहना विभिन्न कारण पुरा हुदैँन् । त्यस्तै आज हामी बलिउडमा प्रेम सम्बन्ध असफल भएका जोडीहरुको बारेमा कुरा गदै छौँ । जसले आफ्नो चोखो प्रेम असफल भएपछि आमाबुबाको रोजाईमा मागी विवाह गरेका थिए । हेरौ को को हुन् ती कलाकारहरु ?
बलिउडकी चर्चित अभिनेत्री माधरी दिक्षित प्रेम एउटासँग र विवाह अर्कैसँग गर्ने नायिकामा पर्छिन् । किनभने माधुरी कुनै समय संजय दत्तसँग गहिरो प्रेममा परेकी थिइन् । तर जब संजय आतंकबादको मुद्धामा जेल परेपनि माधुरीले श्री राम नेनेसँग मागी विवाह गरेकी थिइन् । अहिले उनीहरुको २ सन्तान रहेको छ ।
बलिउडका चर्चित अभिनेता शहिद कपुरको पनि थुप्रै अभिनेत्रीहरुसँग प्रेम सम्बन्ध रहेको हल्ला चलेको थियो । कुनै समय शाहीद करीनासँग प्रेममा रहेको चर्चा चलेको थियो ।तर फेरी फिल्म जब वी मेट रिलिज भएसँगै प्रेम सम्बन्ध टुटेको खबर पनि आएको थियो । त्यस्तै शहिदको प्रियंकासँग पनि सम्बन्ध रहेका हल्ला चलेको थियो । तर अन्तत शहिदले दिल्लीकी मिरा राजपूतसँग मागी विवाह गरे ।
विवेक ओबरायले पनि आफ्नो प्रेम असफल भएपछि प्रियंका अल्वासँग मागी विवाह गरेका थिए । किनभने कुनै समय विबेकको ऐश्वर्यासँग प्रेम सम्बन्ध रहेको भन्दै बलिउडमा ठुलो हल्ला मच्चिएको थियो । यही दुईको सम्बन्धले सलमान खानसँग पनि विवेकको झगडा भएको थियो ।तर अन्तत विवेक र ऐश्वर्याको प्रेम सम्बन्ध टुट्यो ।
बलिउडका यी ४ अभिनेत्रीहरु , जो श्रीमानसँगको सम्बन्धबाट नभई बोइफ्रेन्डसँगको सम्बन्धबाट भएका थिए गर्भवती (तस्विर)
बाहुबली स्टार प्रभासको फिल्म ‘साहो’काे टिजर सार्वजनिक (भिडियोसहित)
‘निशब्दम’को फर्स्ट लुक सार्वजनिक : बाहुबली ‘देवसेना’ देखिइन् यस्तो अवतारमा
रानु मण्डलको पहिलो गीत सार्वजनिक, सार्वजनिक भएको २२ घन्टा नपुग्दै हेरे यतिधेरै दर्शकहरुले (भिडियो)
यी बच्चा आज छन् साउथ फिल्मको ठुलो सुपरस्टार ,३० वर्षपछि देखिन्छन् यस्तो , को हुन् ?
श्रद्धा कपूर बाघी ३ मा अनुबन्धित : श्रद्धाको लागी लेखे साजिद नाडयाडवालाले हाते चिठ्ठी, यस्तो दिइन जवाफ